11/02/2012 : Ankolafy RAVALOMANANA : hatsangana ny komity hifanantona amin’ny FFKM (+vidéo)
Amin’izao dingana misy ny raharaha politika eto Madagasikara izao dia tsy maintsy ny Raiamandreny am-panahy no mandray andraikitra handaminana ny olana. Sarotra ho an’ny mpanao politika Malagasy ny mifanantona raha ny fahitana ny olana nefa tsy maintsy misy aloha ny fampihavanana azy ireo vao afaka miroso ny dingana.
Araka ny fampitam-baovao nentin’ny Depiote Jules Andriamaholison teo amin’ny Kianjan’ny Finoana dia hisy ny komity manokana hajoro eo anivon’ny Ankolafy RAVALOMANANA mba hifanantona amin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara. Izany dia mba hanentanana ny FFKM hiverina ho mpanelanelana sy mpampihavana mba hahitana ny lalan-kombana. « Tsy tokony ny olana tamin’ny 2009 no atao ho sakana » hoy ny solombavam-bahoaka avy ao amin’ny boriborintany voalohany « fa ny hoavy no banjinina ».
Manam-piniavana ve ?
Isan’ny nampanontany tena ny maro ny lahateny nataon’i tgv tamin’ny 07 febroary teo. Tsy nahitana finiavana hamaha ny olana eto amintsika izany fa fireharehana ho manana ny faratampon’ny fahefana sy manan-jo handidy ny ain’ny olom-pirenena manelingelina ny fahefany. Nolazainy tamin’ny izany fa « efa maty » ny Filoha RAVALOMANANA ho azy. Tsy manambany ny ain’ny mpiray tanindrazana akory sanatria fa raha isaina dia mbola maro lavitra noho ny namoy tamin’ny 07 Febroary 2009 ny matin’ny krizy nateraky ny fanonganam-panjakana notarihin’i tgv. Tao ny matin’ny hanoanana, tao ireo nizaka ny vokatry ny tsy fandriam-pahalemana ary maro ny niharan’ny herisetra ka nindaosin’ny fahafatesana noho izany. Noho izany raha misy ny daty tokony ho tsarovana dia anisany ny 26 janoary 2009 no mankaty.
11/02/2012 : 11 Febroary : ny mpanjanaka no nikotrika azy ! (+vidéo)
37 taona androany ny namonoana ny Kol. Ratsimandrava tamin’ny nitifirana azy teny Ambohijatovo avaratra. Raha ny filazan’i Mamitiana Ravelonanosy dia tafiditra tao anatin’ny teti-dratsin’ny Frantsay iny fitifirana ny Kol. Ratsimandrava iny. Hatrany amin’ny vanim-potoana faha-mpanjaka dia nampiasa ny tandapa hatrany ny mpanjanaka handrodanana ny mpitondra tsy mitsinjo ny tombontsoany sy tena vonona hametraka avo ny toeran’ny fiandrianam-pirenena Malagasy. Mbola io antony io ihany no nanosika ny menasofina hikotrika ny fanonganana ny Filoha RAVALOMANANA. Mieritreritra manko ny Frantsay fa na dia efa nomena fahaleovan-tena aza ny Malagasy dia tsy maintsy mbola miera sy mifanaraka amin’izy ireo mialohan’ny handray fanapahan-kevitra goavana.
Rehefa namoaka ny paikady « win win » ny Filoha RAVALOMANANA dia nidonan-tsetroka ny mpanjanaka satria tsy mifanojo amin’ny kajin’izy ireo izany. Raha tsy hiresaka afa-tsy ny sehatry ny angovo ohatra dia nikendry ny hanao ampihomamba ny fitrandrahana solika eto amintsika ny Frantsay. Tsy ety tamin’ny Filoha RAVALOMANANA anafe izany satria izy dia nikatsaka ny hametrahana ho fanoitra ho an’ny toe-karena ny fahasamihafan’ny mpiara-miasa amin’ny seham-pihariana isan-tokony.
09/02/2012 : 07 Febroary 2009 : nisy Jeneraly Frantsay tao ambadika …
Araka ny antotan-tararatasy miendrika tatitra nataon’ny Jly Raoelina dia nisy jeneraly Frantsay isan’ny nikarakara ny fanomanana iny fitondrana olona hatao sorona tamin’ny 07 Febroary 2009 iny. Telo taona aty aoriana dia mbola mitohy hatrany izany ary vao maika mihombo aza. Isan’ny nanenjehana ny Filoha RAVALOMANANA io fony teo amin’ny fitondrana izy. Nolazaina fa mersenera ireo mpampiofana swazilandais niaraka tamin’ny EMMOREG.
Ny fandotoana ny fitondrana RAVALOMANANA manontolo dia efa nomanina fotoana maro fa tsy kisendrasendra velively. Eny na dia ny tetika nandrobana sy nandorana an’Antananarivo aza dia efa vita lamina mialoha. NIjoroan’i Olivier Rakotoavazaha vavolombelona fa tsy teto an’drenivohitra mihitsy ny Filoha RAVALOMANANA tamin’io sabotsy 07 febroary io. Nihaona tamin’ny Filoha ny tenany tamin’io andro io, hoy Rakotovazaha, ary nilaza ny Filoha RAVALOMANANA fa « lasa tany amin’ny fampandrosoana avokoa ny ankamaroan’ny volam-panjakana ka zary nihena ny momba ny fitaovan’ny tafika ». Taorian’ny dinika moa dia voalaza fa nandray sidina ho any amin’ny Faritany Mahajanga ny Filoha noho izany dia tsy misy porofo milaza fa izy no nanome baiko ny mpiambina ny Lapa satria manelilngelina ny mpanamory raha mampiasa finday any anaty helikoptera koa tsy afaka nampiasa izany hampitany baiko ny Filoha RAVALOMANANA .
08/02/2012 : Hevitra tsy mitovy ve dia anafihana lapa ? (+vidéo)
Tsy miaky ny andraikiny tamin’ny 07 Febroary 2009 mihitsy ny mpanongam-panjakana hatreto. Raha ny lahateny nataon’i tgv omaly tamin’ny fahatsiaroavana nakalazain’izy ireo dia mbola mifono fiantsiana sy fandrangitana ary tena tonga hatramin’ny fanozonana ny Filoha RAVALOMANANA mihitsy aza. Nambarany manko fa « efa maty ireny olona ireny ary eo akaikin’ny devoly » raha niresaka izay ampangainy fa tomponantoka ny tenany .
Iray minitra ao anatin’ny horonantsary mirakitra ny zava-nitranga tamin’io sabotsy mena io anefa dia efa ampy hiampangana an’i tgv. Mbola teo amin’ny Kianjan’ny 13 may izy ireo dia efa nanome tso-drano ny mpanara-dia azy indray ity mpanongam-panjkana ity mba haka ny lapan’Ambohitsorohitra satria « an ‘ny vahoaka io ». Ny tanjona teo dia ny hitarika ny olona hitsofoka any amin’ny toerana efa nomanina hisian’ny ‘tires croisés » mba hahazahoana ny mandoto ny tanan’ny Filoha RAVALOMANANA amin’ny ràn’ireto mpiray tanindrazana ireto.
Tondro zotra : nokosehin’i tgv ny andininy faha-03
Talohan’ny 17 septambra dia mbola noraisin’izao tontolo izao ho mpisora-tena toa voatango i tgv. Rehefa natao sonia anefa ny tondro zotra dia napetraka tamin’ny fomba iaraha-mitantana ho filohan’ny tetezamita izy. Ny fihetsika nataony omaly anefa dia manamafy fa tsy mendrika hitondra firenena izy ary mendrika ho kosehina avy hatrany ny andininy faha-03 mametraka azy eo amin’izany toerana izany.
Isan’ny tokony hangataka famotsoran-keloka mihitsy i tgv raha ny resaka 07 febroary no jerena. Telo taona lasa izay dia izy no tomponandraikitra tamin’ny nahafaty ireo mpiray tanindrazana natao sorona teny Ambohitsorohitra. Telo taona aty aoriana, ny 07 Febroary 2012 anefa dia manohy ny amboletra sy ny toe-tsaina tsy mihevitra ny mahasoa ny Firenena fa manao azy ho manjaka tokana eto an-tany ka na dia ny ain’ny olombelona aza dia izy no mandidy sy mandahatra izany.
07/02/2012 : Hadinon’ny FATE ny 26 janoary 2009
Tsy niloa-bava mihitsy i tgv tamin’ny 26 janoary teo na dia fitsingerenan’ny daty nanirahany ny namany handoro sy handroba aza izany. Mbola maro lavitra noho ilay atao dridrangilo amin’ny haino aman-jery androany anefa ireo namoy ny ainy na mivantana na ankolaka tamin’io alatsinainy mainty io. Tsy misy voakitikitika hatreto ireo tomponantoka tamin’izany satria eo amin’ny fitondrana ilay nitso-drano sy naniraka ary misy porofo mazava izany fa tsy hoe noforonina akory.
Raha tena sahy sy milaza azy fa marina ny FATE dia tokony tsy hisy dinganina toa izany ny tetiandro fa lalovana avokoa izay dingana nataon’ny tantara. Ny raharaha 07 Febroary lalandava no andotoana ny anaran’ny Filoha RAVALOMANANA sy itazomana ireo mpitandro filaminana sasanay any am-ponja nefa ny « lundi noir » odian’ny FATE tsy hita. Na ny dokam-barotra mikasika ny fandihizan’ny FATE teny Ambohitsorohitra androany aza tsy nahitana ny sary tamin’ny 26 janoary 2009 raha tazana tao avokoa ny 10 Aogoristra 1991 sy ny 07 febroary 2009. Miantso ny hamoahana ireo gadra politika ireo tsy misy hatak’andro arak’izany ny fianakaviany sy ireo efa nahazo fahafahana. Tsy sanatria hanakorontana no tanjon’izy ireo fa handamina ny Firenena. Raha mbola misy anefa ny any am-ponja dia ho sarotra ny handamina ny tany satria misy lonilony tsy afaka any ho any.
06/02/2012 : Fanakanana an'i Lalao RAVALOMANANA : manontany tena izao tontolo izao (+vidéo)
Henatra ho an'i Madagasikara ny nataon'ny FATE tamin'ny sabotsy teo araka ny lahatenin'ny Filoha RAVALOMANANA. Nambarany fa mametra-panontaniana ireo mpitondra afrikana amin'izao fotoana hoe "ny vadinao koa ve dia atahoran'izy ireo". Nanterin'ny Filoha RAVALOMANANA fa tsy hivaha mihitsy ny olana eto amintsika raha mbola toe-tsaina toa izany no ifampitondrana. Nambarany ihany koa fa "tokony hijery ny Malagasy 20 tapitrisa ny mpanao politika fa tsy entin'ny fitiavan-tena tafahoatra toy izao". "Nalahelo mafy mihitsy i Neny" hoy ny Filoha RAVALOMANANA "satria efa eo ampototry ny fiaramanidina no naverina satria hoe tsy miainga ny sidina raha mitondra azy" noho ny fampitandremana avy aty Madagasikara momba ny fiahiana ny ainy.
Arak'izany dia nampitondra hafatra ho an'ny vahoaka Malagasy Lalao RAVALOMANANA ka ny Minisitry ny varotra Olga Ramalasaona no namaky izany teo amin'ny Kianjan'ny Finoana notronin'ny minsitry ny fitsinjaram-pahefana Ruffine Tsiranana:
HAFATRI_NENY.pdf 270.62 Ko
03/02/2012 : Filoha RAVALOMANANA : "Ankasitrahin'izao tontotolo izao ny fodian'i Neny"
Miaiky ny fahendren'ny Filoha RAVALOMANANA mivady ny ankamaroan'ny Firenena manerana ny tany. Izay no azo lazaina taorian'ny ny fampitam-baovao nentin'ny Filoha RAVALOMANANA tamin'ny vahoaka teo amin'ny Magro androany. Nambarany fa antso an-telefonina avy tamina Filoham-pirenena maro indrindra manerana an'i Afrika no nitso-drano izany fiverenan'ny Renin'ny Malagasy izany. Nambaran'izy ireo fa "fanapahan-kevitra feno fahendrena izany ary manaporofo fa tsy ianao no tsy te-hody any Madagasikara" hoy ireo olo-manan-kaja ireo araka ny nampitain'ny Filoha RAVALOMANANA ihany. Efa fantatry ny SADC sy ny TROIKA ihany koa izao fanapahan-kevitra izao sady nahazo ny fankatoavan'izy ireo ary nidera ny faneken'ny Filoha RAVALOMANANA ny fandaminana mikasika ny fiverenany an-tanindrazana ihany koa izy ireo.
Mikasika ny dian'i Neny kosa dia nambaran'ny Filoha RAVALOMANANA fa efa tomombana avokoa ankehitriny ny mikasika izany ary tsy misy atahorana satria efa nahazo ny fanomezan-toky avy amin'ny tomponandraikitra isan-karazany na any ivelany na aty Madagasikara. Nankasitrahin'ny Filoham-pirenena ny fanomanana ny fitsenan'ny vahoaka Malagasy azy ary mbola namafisiny ny tokony hitoeran'ny fahendrena hatrany amin'ny mpandala ny ara-dalàna. Noderain'ny Filoha RAVALOMANANA moa ny finiavana sy ny fahavitrihan'ny vahoaka tao anatin'ny telo taona maninjitra nitakiana ny fiverenan'ny ara-dalàna mba ahafahana mampandroso indray ny tanindrazana iombonana. Naverimberiny ihany koa fa afaka mifampiresaka amin'ny hery velona rehetra Lalao RAVALOMANANA indrindra raha ny famerenana ny ara-dalàna sy ny hampandrosoana an'i Madagasikara no fototry ny fifanakalozana. Nampahatsiahivin'ny Filoha koa fa efa nandray anjara tamin'ny raharaha politika i Neny tamin'ny ezaka nazahoana ireny fanampiana ho fampitomboana ny fidrana an-tsekoly ho an'ny zaza Malagasy ireny ary isan'ny antony nananganana ny fikambanana "Viavy Tiako" izay tarihiny ny hanamora ny fiainan'ny zaza amam-behivavy eto Madagasikara.
03/02/2012 : Hanjavona ny FATE … (+vidéo)
« Tsy miraharaha » mahafehy ny toetran’ny FATE hatramin’ny 2008 no mankaty izany raha ny zava-bitany no jerena. Tsy mba mitsinjo ny mpiara-belona sy ny tanindrazana fa ny mahasoa azy ireo manokana no imasoany. Madiva hifarana anefa izany ankehitriny satria ny zatra mikitrana dia tsy mahay mandamina velively. Amin’izao fotoana izao dia mizotra mankany amin’ny fandresen’ny mpandala ny ara-dalàna ny toe-draharaham-pirenena raha ny fijery azy. Ny fiverenan’ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA ohatra dia hanaporofo amin’izao tontolo izao sy amin’ny Malagasy mbola misalasala fa tena vonona hiverina an-tanindrazana ny Filoha sy ny fianakaviany saingy ny FATE no manao izay tsy hahatanteraka izany.
Tao anatin’ny telo taona mantsy izao dia narangarangan’ny FATE fa matahotra ny fitsarana Malagasy ny Filoha RAVALOMANANA ka tsy sahy miverina fa mamita-bahoaka fotsiny ary nahazakan’izy ireo ny marivo salosana rehetra izany tsaho izany. Ankehitriny dia inoana fa tsy hanao sorona ny vadiny velively ny Filoha fa tsy maintsy hiverina tsy ho ela. Efa nanambara izany rahateo ny tenany androany raha nitafa tamin’ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna. Hifarana hatreo ny ny fanjakazakan’ny FATE satria hatramin’ny amboletra rehetra nataony aza efa manomboka tratra avokoa. Miampy ny tahotra ny Filoha RAVALOMANANA izany dia hitarika azy ireo any amin’ny fahaverezana lalindalina kokoa.
02/02/2012 : Nitafa mivantana tamin’ny vahoaka Malagasy Lalao RAVALOMANANA
"Hody amin’ny sabotsy hoavy izao aho” hoy Lalao RAVALOMANANA vadin’ny Filoham-pirenena raha niresaka mivantana tamin’ny vahoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny tenany. Nambarany fa efa dibo-kafaliana sahady izy mieritreritra ny ho tafahaona amin’ny mpiray tanindrazana amin’io andro io. Nanentana mivantana ny olona hitsena azy Lalao RAVALOMANANA ary efa nandray sahady ihany koa ny fialan-tsin’ireo tsy afaka noho ny antony maro samy hafa. Fohy nefa feno fahamatorana sy fahamendrehana tanteraka ny lahateny noraisiny sady nofaranany hoe “aza mitsahatra mivavaka fa Andriamanintra mahalala ny mahasoa antsika”.
Ny Filoha RAVALOMANANA kosa dia nankahery ny vahoaka Malagasy indrindra amin’ny fahendrena sy ny fahaizana mandamina amin’io andro sabotsy io. “Nampiaiky an’izao tontolo izao ny fahendrena nasehonareo tamin’ny 21 janoary teo” hoy ny Filoha “koa irariako hitohy izany”. Nampanantena izy fa hampitondra hafatra ny vady andefomandriny ho an’ny vahoaka Malagasy tsy an-kanavaka.
01/02/2012 : Hody i Neny … ilay tena Renin’ny Malagasy
Ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA vady andefomandriny no nanamabara izany am-pahibemaso androany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka rehefa nitafa tamin’ny vahoaka. “Malahelo ny vahaoaka Malagasy izy noho ny fahoriana niaretana tao anatin’ny telo taona” hoy ihany ny Filoha RAVALOMANANA. Nambarany fa ny zoma hoavy izao farafahatarany no hamafisiny amin’ny vahoaka Malagasy ny andro sy ny ora hiverenan’I Lalao RAVALOMANANA an-tanindrazana. Nankasitraka ny fahatsiarovan-tenan’ny ankamaroan’ny foloalindahy ny Filoha ary manentana ireo vitsy an’isa mbola mamikitra fatratra amin’ny mpanongam-panjakana mba hieritreritra ny hoavin’ny taranaka faramandimby.
Mikasika ny raharaham-pirenena ankapobeny dia nambaran’ny Filoha RAVALOMANANA fa nihaona tamina mpitondra fanjakana sy tomponandraikaitra iraisam-pirenena maro ny tenany tany Addis-Abeba ary nifampizara vaovao tamin’izy ireo. Ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena dia nanantitra tamin’izany fihaonana izany fa tsy hisy ny fanampiana ny fitondrana raha tsy tafaverina an-tanindrazana ny Filoha RAVALOMANANA satria mariky ny fitoniana isany sady dingana lehibe amin’ny famahana ny krizy. Niantso ny finiavan’ny mpanao politika Malagasy hatrany ny Filoha RAVALOMANANA mba hametraka ambony ny fitiavan-tanindrazana fa tsy hanaiky ho baikon’ny fitiavan-tseza n any fitiavam-bola.